Iphaneli yeSolar, ibhetri yeSolar, iSolar Light-ShaoBo
okusemandleni akho ukhetho
I-HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd. yinkampani yobuchwepheshe obuphezulu obuchwephesha obubandakanyeka kuphando lwe-silicon yelanga kunye nophuhliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa, imarike ephambili yeeseli zelanga, iimodyuli, kunye neenkqubo zokuvelisa i-photovoltaic, njl., iimveliso. isetyenziswa kwindawo yokuhlala, yorhwebo, kunye nenkqubo yokuvelisa amandla.
I-450w mono 144 isiqingatha seeseli ezisebenza ngamandla elanga...
Izikhukhula Ukukhanya 3.04.0 umgangatho ophezulu 5 iminyaka warran...
3kWh 5KWh 10KWh umgangatho olungileyo isixokelelwano selanga sasekhaya
ukutshaja okuselfowuni+ indawo encinci yokugcina ikhaya lamandla elanga...
Umzi-mveliso uhlanganisa indawo ye-30000 square metres, indawo yokwakha ye-21000 square metres, inomgca wokuvelisa imodyuli emihlanu yelanga, iimveliso eziphambili ziyimodyuli yelanga ye-monocrystalline kunye ne-polycrystalline, inokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi. Ubungakanani bentengiso bujikeleze i-800-1000MW minyaka le.
144Cell iiPaneli zeSolar Monocrystalline
Xa uthengela i-SHAOBO iimveliso zeSolar uya kufumana umgangatho we-premium, isisombululo esinokwethenjelwa samandla aluhlaza kunye nolwakhiwo oluphezulu, luhamba kunye nomgca wenkonzo yabathengi.
IiPaneli zeSolar Monocrystalline ezingama-72
I-SHAOBO iimodyuli ze-solar ze-mono, ezikwabizwa ngokuba yi-mono solar panels zisebenza ngokufanelekileyo, ukumelana ne-PID, ukusebenza okuphantsi kokukhanya, ukunyamezela kwemozulu enzima kunye nokuqina kwiimeko ezingqongileyo.
60 iiSeli zeSolar Monocrystalline Panels
Phantse iminyaka eyi-15 yamava okuvelisa, kunye nekhonkco loshishino lwe-photovoltaic - i-silicon, i-silicon wafer, iglasi, ibhetri, imodyuli kunye nesikhululo samandla, nge-ISO9001; I-2015 & iso14001: isatifikethi senkqubo ye-2015 siqinisekisa ukuba amacandelo e-SHAOBO anezixhobo ezigqwesileyo kunye nomsebenzi ogqwesileyo.